Galeyr: Haddii nabad la waayo dagaal ayaan ku wadeynaa Somaliland – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 19 February 2015 19 February 2015
Mareeg.com: Madaxweynaha Khaatumo State, Cali Khaliif Galeyr ayaa sheegay in Khaatumo sii wadi doonto dagaal ay kula jirto maamulka Somaliland ilaa maamulkaas uu ka baxayo dhulka maamulkiisu leeyahay.
Galeyr oo la hadlay qaar ka mid ah warbaahinta ayaa sheegay in 10-kii maalmood ee ugu dambeeyay ay dagaallo ka dhacayeen deegaanno ka tirsan gobolka Sool.
Dagaallada dhacay ayuu sheegay iney yimaadeen kadib markii la weeraray saldhigyo ay ku sugnaayeen ciidamada maamulka Somaliland.
“Tobankii maalmood ee ugu dambeeyay ciidamada Khaatumo waxay meel walba ku weerareen ciidanka Somaliland, waxaa ugu dambeysay weerar habeen hore dhacay,” ayuu yiri Galeyr.
Cali Khaliif ayaa sheegay in maamulkiisa uu ku fidi doono meel walba oo ka mid ah kuwa ay ka haystaan maamulka Somailland, isagoo ku daray intaas inay dajiyeen wada-tashi iyo qorshe muhiima ah, sidoo kale wuxuu tilmaamay inay doonayaan inay nabad kula noolaadaan maamullada dariska la ah, hase ahaatee aysan ogolaanayn in awood loo adeegsado.
“Haddii aan nabad la helin, waxaa waajib inaan dagaalanno oo aan xoreyno meelaha nalaga haysto oo dhan, waana taas tan ay fikradeennu kusoo ururi doonto. Annaga waxaa naga ballan ah ummadda waxa danteeda ah inaan ka shaqeyno,” ayuu mar kale yiri Galeyr.
Cali Khaliif ayaa sanadkii hore madaxweynaha maamulka Khaatumo loogu doortay tuulada Saax-dheer, waxaase wixii xilligaas ka dambeeyey ciidan daba dhigay maamulka Somaliland oo aaminsan in dhulka Khaatumo sheeganeyso ka mid yahay Somaliland.